Transfer Xiriirada ka Nokia in Android
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Nokia in Android
Helitaanka phone cusub waa u fududahay. Laakiin wareejinta xiriirada aad ka weyn tahay in aad qalab cusub waxay noqon karaan qaar aad u adag iyo waqti lumis haddii aadan haysan qalabka saxda ah. Haddii, si kastaba ha ahaatee aad leedahay jir madow iyo caddaan phone Nokia, sida kaliya ee ay u gudbiyaan xiriirada aad waa in ay iyaga nuqul in SIM card ka dibna dib kaga dayanayaan in aad telefoon cusub. Inkastoo habkan la shaqeyn doono telefoonada ugu, waxa uu leeyahay ay xad u gaar ah. Tusaale ahaan, waxaad qaadi kartaa oo keliya dhigay 250 xiriirada ee SIM ah waqti iyo casriga maanta casriga ah ee u baahan SIM card in la jaro in le'eg ku haboon waa in ay ku habboon. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad taleefan ayaa taageero USB, kaas oo ay tahay waxa ay leeyihiin, akhri on.
Habka effortless si ay u gudbiyaan xiriirada (<10 daqiiqo)
Free Habka: xiriirada Transfer isticmaalaya Nokia Suite (> 20 daqiiqo)
Habka effortless si ay u gudbiyaan xiriirada
MobileTrans Ka Wondershare waa wax fudud, 100% ammaan ah oo aan halis lahayn si ay u gudbiyaan oo dhan xiriirada, abuse wac, sawiro, videos, barnaamijyadooda iyo music taleefanada Nokia in Android iyo madallo kale oo badan oo ka mid ah oo kaliya click. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in aad computer, aad qalabka Nokia oo Android iyo software MobileTrans. Waa kuwan tallaabooyinku kuu raaci kari waayay inuu sameeyo wax.
Wondershare MobileTrans --Guji 1 Nokia in Android DataTransfer
1. Ka hor inta aynaan bilaabin, waxaa muhim ah in aad hubiso in aad updated software qalab ay ku version ugu dambaysay ee tegaya inuu Settings, About Phone, Software Update iyo tuubada Check casriyeysan .
2. Waa in markaas Waxaad kala soo bixi iyo rakibi MobileTrans software on your computer.
3. Next, xirmaan laba qalab aad via USB si aad u computer iyo shid hab debugging USB qalabka Android aad.
4. Open ilaa Wondershare MobileTrans . Tani waa user-friendly qalabka fudud ee iyo inta badan in aad waligaa guud iman doonaa oo halkan sababta. Sida ugu dhakhsaha badan aad ku xidhan labada qalabka si guul ah, barnaamijka wuxuu muujin doonaa phone isha ku bidix iyo mid ka mid ah taas oo xogta lagu wareejin doonaa xaq. Waxaad isticmaali kartaa badhanka Flip in la beddelo il iyo caga telefoonada. Dhammaan xogta in loo gudbin karaa inta u dhaxaysa qalabka aad lagu soo bandhigi doonaa sanduuqa dhexe, sida hoos ku qoran.
5. Si fudud u calaamadee xogta aad rabto wareejiyo, in arrintu Xiriirada oo guji badhanka Start Copy.
6. Waxa kasta oo aad la doortay waxaa loo wareejin doonaa qalab Android aad waqti.
Tan iyo socodka hawsha oo idil waxaa lagu fuliyaa si toos ah uga phone in telefoonka, uma baahnid inaad u helaan wax kasta oo internet, in la hubiyo in dhamaan macluumaadka gaarka ah ayaa weli ah ee gaarka loo leeyahay. Macluumaad darroor xasaasi yihiin si fudud u suurtoobin MobileTans.
MobileTrans Sidoo kale kuu ogolaanaya in aad dib ilaa macluumaadka telefoonka iyo faylasha aad si aad u computer oo iyaga soo celinta waa sida ugu fudud ee gujinaya celin ka furmo suuqa kaabta. Sidoo kale ogsoonow in haddii aad leedahay a Phone Windows, waxaad u baahan doontaa inaad gurmad ugu horeysay xiriir si aad u Onedrive ka dibna ay isticmaalaan celin ka gurmad doorasho si ay u gudbiyaan xiriirada.
Ka hor inta aadan iska tuur, iibiso, ganacsiga ama ha iska bixin telefoonka, aad shaki la'aan ay doonayaan inay masixi dhammaan xogta ku yaal hore si looga hortago khatarta tuugada aqoonsiga. Si fudud resetting telefoonka in goobaha warshad ama tirtirka buuga aan xogta joogta ah baabbi'in doonaa. Barnaamijyada soo kabashada Data weli waxaa loo isticmaali karaa in ay dib u hesho macluumaad. Tani waa meesha MobileTrans runtii soo iftiimay. Waxaa ka mid ah muuqaal in ay si joogto ah u tirtiri soo baxay xogta oo dhan US isticmaalaya farsamada Military, taas oo loo hubiyo in aan lagu soo kabsaday karaa in si kasta oo suurto gal ah.
Free Habka: xiriirada Transfer isticmaalaya Suite Nokia
Tan iyo markii ugu telefoonada Java iyo Symbian Nokia leeyihiin taageero USB, xiriirada si fudud loo wareejin karaa qalabka Android isticmaalaya Nokia Suite. Just raac talaabooyinka hoos ku sharraxan:
1. Head u Softonic.com iyo soo bixi software ah Suite Nokia PC
2. Ku rakib barnaamijka
3. Ku bilow barnaamijka iyo telefoonka Nokia aad ku xidhmaan Nokia PC Suite isticmaalaya cable USB ah
4. Hadda, falgali in menu Contact iyo dooro oo dhan xiriirada aad rabto in lagu wareejiyo
5. Riix File ka dibna dhoofinta
6. Dooro goob on your computer meesha aad rabto in lagu badbaadiyo file ah oo guji Save
7. A file CSV cusub la abuuri doonaa meesha aad ku cad
8. Si wareejiyo file si qalab Android aad, waxaan ka dhigi doonaa isticmaalka adeega Google Contact nidaameed. Sidaas, furto xisaabtaada Google on your computer
9. Under menu Contact ah, dajiyaan file CSV in aad abuuray oo keliya on your computer
10. qalabka Android aad, hubi in aad qortey in la isla Google akoonka aad rabto in aad uploaded file CSV ah.
11. Tag Settings, Account & nidaameed iyo hubi xiriirada nidaameed
12. xiriirada aad hadda laga heli doonaa aad casriga ah ee xoogaa ilbiriqsiyo ah
Waxaa muhiim ah in la ogaado in kastoo ay habkan waa lacag la'aan ah, waxaa jira fursad ah in xogta aad uu xaday internet-ka iyo tuugada macluumaadkan ujeedooyin xaasidnimo isticmaali karaan. Sidaas, waxa si weyn lagu talinayaa in aad isticmaasho software ah sida Wondershare MobileGo u soo degida faylka si qalab Android aad si looga hortago khasaaro macluumaad xasaasi ah. Tani waa software ah oo lacag la'aan ah oo kuu ogolaanaya in aad si fudud u maareeyaan iyo aad habayso smartphone Android.
> Resource > Windows > Transfer Xiriirada ka Nokia in Android Effortlessly